Sagaal nin oo ka tirsan al.shabaab oo muqdisho maanta lagu soo bandhigay… | Mudug24
Sagaal nin oo ka tirsan al.shabaab oo muqdisho maanta lagu soo bandhigay…
Wasaarada Amniga Qaranka Somaliya, ayaa waxay maanta Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay sagaal nin oo lala xiriirinaayo Ururka Al Shabaab, waxaana lagu soo qab qabtay hawlgal saakay laga sameeyay duleedka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Dowladda oo saakay hawlgal ka sameeyay deegaanka Saqiira, oo ku yaala duleedka Degmada Dayniile, ayaa waxaa suurta gashay in raggaasi lala soo qab qabto hubkii ay heysteen, waxaana lagu soo xiray Xarunta Nabad Suggidu ku lee dahay Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan, oo Saxaafada kula hadlay goobtii raggaan lagu soo bandhigay, ayaa wuxuu ku sheegay inay yihiin shabakad ka tirsan Ururka Al Shabaab, oo hubka soo gelin jirtay Magaalada Muqdisho.
Hubka Shabaabka oo doomo lagu keeni jiray deegaanka Saqiira, ayuu xusay inay iyaguna kaga soo qaadi jireen gaari dameero, iyagoo isu ekeysiinaaya inay yihiin dad reer miyi ah.
Sidoo kale wuxuu sheegay inay jirto shabakad kale oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, oo hubka doomo ka soo saarto deegaanka Ceel-jaale ee duleedka Magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay inay raggaasi ku daba jooggaan.
Maxamed Yuusuf Cismaan, ayaa waxa uu xusay inay jiraan xubno kale oo Shabaabka ka tirsan oo macluumaad ay ka helayn laamaha ammaanka, ayna ku daba jiraan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa, sida uu yiri.
Ururka Al Shabaab kama hadlin xubnaha ka tirsan ee hawlgalka lagu soo qab qabtay, waxaase xusid mudan inaan Shabaabka looga fadhin inay ka hadlaan ragga ka tirsan, kolka ay u gacan galaan Dowladda Federalka Somaliya.
Previous articleHiiraan oo qoorta looga jaray macalin dugsi quraan….
Next articleMusharax cabdi raxmaan diinaari oo ka hadlay rajada uu ka leeyahay ku guuleysiga madaxwaynaha mamulka gobolada dhexe….